🥇 I-ZenMate VPN 2022: imibono, izinzuzo, ububi, indlela yokuyisebenzisa...
✅ I-VPN yamahhala
🥇 Ama-VPN amahle kakhulu
I-VPN ye-premium eshibhile. Izici zayo ezivelele yilezi:
Ama-IP avela emazweni angama-74
Ivelele ngekhwalithi-inani layo
Vakashela iwebhusayithi yabo
I-Zenmate ingenye yabasanda kufika, umhlinzeki omusha kunabanye asebenebhizinisi isikhathi eside. Kodwa selifikile ukuhlala futhi ngamandla. Ezinye zezici zayo azikho umona komakadebona abaningi, iyabadlula ngisho kokunye.
Ngakho-ke, uma uhlola insiza ye-VPN ekufanele kakhulu, kufanele ufake i-ZenMate phakathi kwabazokhethwa, ngoba Kuzokumangaza, Nakuba kungeyona into engcono kakhulu...
Odinga ukukwazi ngeZenMate VPN
Ukunquma ukuthi i-ZenMate iyisevisi oyidingayo noma cha, kufanele uhlaziye iphuzu ngalinye kwalandelayo ukuze wazi. wonke amandla nobuthakathaka yale sevisi...
I-ZenMate ikunikeza ukuthula kwengqondo, nokubethela okuqinile kusetshenziswa i-algorithm AES-256, okuwukuphepha kwayo kwezempi. Ngaphezu kwalokho, iphinde isekele izivumelwano ezivikelekile zamathaneli akhiqiziwe, njenge-IPSec/IKEv2, ne-L2TP/IPSec, nakuba isevisi yeprimiyamu iphinde ihambisane ne-OpenVPN.
Ngokuvamile amaklayenti akho asebenzisa ngokuzenzakalela izimiso I-IPSec ne-IKEv2 yabasebenzisi be-Mac, kuyilapho kubasebenzisi be-Windows kuzoba okufanayo, futhi yengeza inketho ye-L2TP/IPSec. Ngaphezu kwalokho, izivumelwano zeZenMate zingasetshenziswa kuzo zombili i-AES-128 kanye ne-AES-256, nakuba eyakamuva iphumelela kakhulu. Ngaphandle kwalokho, kwaZenMate bayeluleka ukusebenzisa i-128-bit eyodwa, ngicabanga ukuthi ngenxa yezizathu zejubane...
Uma unendaba nedatha yakho, kufanele wazi ukuthi iZenMate nayo inakho Khipha ushintsho ukunqamula inethiwekhi uma kwenzeka i-VPN iyeka ukusebenza, okukuvimbela ukuthi ungashiyi idatha ethile obala uma ungakubonanga ukuphazamiseka.
Okokugcina, i-ZenMate inezici ezengeziwe zokuphepha, ineskena se I-malware ekwazi ukubona izinhlobo ezingafika kwezingama-66 zekhodi enonya ukuze ivinjwe futhi ivimbele izifo.
Njengephuzu elimelene nayo ukuthi isitholakele vula i-IP yakho kwezinye izimo. Ngokuvamile ayihluleki, kodwa ingaba nezinkinga ezithile ngamaseva e-DNS/WebRTC API lapho umhubhe we-VPN uzitshwa khona...
Ijubane leZenMate kwamukelekile impela, ngokuba phakathi kwesilinganiso esisheshayo. Nokho, ingase ihambe kancane kunezinye izinkonzo. Ngaphezu kwalokho, kulabo abahlala eYurophu, ijubane layo lihle futhi lizinzile, lifinyelela izikhathi ze-ping ngisho nezikhathi eziningi eziphakeme kunalezo zase-United States, isibonelo. Ngakho kukhona umehluko omkhulu. Okufanayo ngesivinini sokulanda nokulayisha, nakuba kulokhu, umehluko phakathi kweYurophu ne-US awumkhulu njenge-ping.
Isizathu salo mehluko ukuthi iZenMate inenani elikhulu lamapulazi amaseva atholakala ikakhulukazi kuwo izwekazi laseYurophu, enamaseva angaba ngu-298 emazweni angaba ngu-31 ahlukene. Kuzo zonke, zi-3 kuphela ezizoba sezweni laseMelika futhi inani elifanayo lisatshalaliswe kulo lonke elase-Afrika, e-Oceania nase-Asia.
Iqiniso ukuthi iZenMate hhayi okuhle kakhulu ngale ndlela. Kuyiqiniso ukuthi abanawo amarekhodi noma abagcina ulwazi lomsebenzi owunikeza i-VPN nenye idatha yomuntu siqu, kodwa bagcina ulwazi oluthile mayelana ne-IP yakho, ulwazi lwesiphequluli sewebhu kanye nenguqulo yesistimu yokusebenza, njll.
Ngaphezu kwalokho, inkampani itholakala eJalimane, ngakho-ke kuzodingeka uhambisane nemithetho yezwe ukuze wabelane ngedatha uma abanye ohulumeni beyicela. Okusho ukuthi, izoba endaweni ebizwa ngokuthi i-14 Eyes jurisdictional territory.
Okungeziwe kanye nezici
Uma ufuna i-ZenMate njengesevisi ye-VPN yokulanda noma ukufinyelela okuqukethwe kokusakaza, sengiyakwazi ukukutshela ukuthi kufanele ucabange kangcono ngezinye izinkonzo yomncintiswano, njengoba kungasebenzi kahle kulezo zimo.
Isibonelo, nakuba ingavulela i-US okuqukethwe kwe-Netflix kahle, futhi isebenze kwabanye abahlinzeki balezi zinsizakalo, ayisekeli i-torrenting noma i-P2P, ngakho-ke ingakwazi ukukala kancane izinhlelo zokusebenza zokusetshenziswa...
Ngokungezwa kwe-OpenVPN, i-ZenMate isizuzile Compatibilidad. Ivula inketho ye-VPN eguquguqukayo impela ngezinhlelo zokusebenza zeklayenti nezandiso zamasistimu amaningi. Isibonelo, ingasebenza kumadeskithophu, amadivaysi eselula, ama-smart TV, kanye nasezipheqululini ezinkulu zewebhu.
Uzothola izinhlelo zokusebenza zeklayenti yeWindows, macOS, kanye neyomakhalekhukhwini ene-iOS, i-Android, kanye nezandiso ze-Opera, iMozilla Firefox ne-Google Chrome. Kodwa-ke, ungayenza isebenze kwezinye izinhlelo usebenzisa i-OpenVPN, njenge icala le-linux.
Kepha isikhombimsebenzisi yeZenMate, uzokwazi ukuqinisekisa ukuthi icace kakhulu futhi kulula ukuyisebenzisa, ukwazi ukuqalisa i-VPN ngendlela elula kakhulu.
Ukusekelwa kwabasebenzisi beZenMate ithikithi elisuselwa, into abasebenzisi abafuna ukushesha ngezinsizakalo zocingo noma izingxoxo ezibukhoma abangayithandi. Impela, ungenza imibuzo yakho ibe ngu-24/7, bese ulinda ukuthi ikuphendule. Ngokuvamile aziphuzi ukuphendula njengezinye izinsiza, futhi ngokuvamile zikunikeza impendulo ngaphansi kwamahora angu-24.
Ngaphezu kwalokho, abanye abasebenzisi amaklayenti Baye bakhononda ukuthi izimpendulo azicaci kahle kwezinye izimo, ngakho-ke azisizi kakhulu… Nokho, isevisi akufanele yehluleke futhi cishe awukudingi ukusekelwa.
Igqame ngokuphepha kwayo
Enye yezinzuzo zeZenMate ukuthi unayo uhlelo lwamahhala, mahhala ngokuphelele, kodwa lokho kulinganiselwe njengoba kulindelekile. Isibonelo, uzokwazi ukufinyelela kuphela izindawo zeseva ezi-4 uma kuqhathaniswa nezingaphezu kuka-74 ekubhaliseni kwe-Ultimate premium. Lawa maseva azosingathwa eJalimane, e-Hong Kong, e-United States nase-Romania.
La velocity izophinde ikhawulelwe ku-2 MB/s, kuyilapho ku-Ultimate ungenaso isivinini noma imikhawulo yethrafikhi. Futhi amaklayenti kokuthi Mahhala uzoba nawo kuphela njengezandiso zeziphequluli ezintathu eziyinhloko, kuyilapho kokuthi Ultimate unazo kumasistimu okusebenza amaningi. Ngamanye amazwi, kokuthi Mahhala ungavikela ithrafikhi yesiphequluli kuphela hhayi isistimu yonke.
Imahhala nayo iyashoda ukwesekwa okwesifufula ne-P2P, ukusekelwa komuntu siqu, ukwabiwa kweseva ehlakaniphile ukuze kusebenze kangcono, ayisekeli i-OpenVPN noma, ayikwazi ukusetshenziswa ne-Netflix, i-Hulu nezinye izinsiza zokusakaza, ayinakho ukulungiselelwa, noma Kill switch, noma ukuvikelwa kobunikazi...
Ukuze uthole konke lokho, kufanele ukhokhe ukubhalisa kokugcina okubiza u-$11,99/ngenyanga, okuyibeka phakathi kokubiza kakhulu. Iphinde ibe nohlelo oluphelele lonyaka ongu-1, ikwazi ukonga kufikela ku-67% ngo-$3.99/ngenyanga, noma iminyaka emi-2 ngo-$2.05/ngenyanga. Ngakho-ke, kufanelekile ukuthenga izinkonzo esikhathini eside.
Impela, banohlelo lwesilingo samahhala sezinsuku eziyi-7, kanye nethuba lokukucela lokho Buyisela imali uma ngaphambi kwezinsuku ezingama-30 zokuqulwa kwecala ungakaqinisekiswa yinkonzo.
Uma ukhathazeka indlela yokukhokha, kufanele wazi ukuthi bamukela amakhadi esikweletu i-MasterCard, i-VISA, i-American Express, i-PayPal, kanye nezinye izindlela zokukhokha ezengeziwe.
Ungayisebenzisa kanjani I-ZenMate VPN
Okokugcina, uma unqume ukusebenzisa i-ZenMate VPN, kufanele wazi izinyathelo ezijwayelekile ukuze ukwazi qala ukuze ujabulele isevisi yakho:
Iya ku- indawo yokulanda yeZenMate kuwebhusayithi yayo esemthethweni.
Chofoza isithonjana sesistimu yokusebenza noma isiphequluli sewebhu ofuna ukufaka kuso i-VPN.
Manje ikuqondisa kuwebhusayithi enenkinobho ukuze ulande isofthiwe efanele yesikhulumi esikhethiwe. Landa futhi ufake.
Qalisa isoftware bese ulandela iwizadi yayo lapho ongakha khona i-akhawunti uma ubungenayo enye edalwe kuwebhusayithi yeZenMate uqobo.
Ngemva kokufaka idatha ye-akhawunti yakho, imenyu enkulu yohlelo lokusebenza izoboniswa lapho ungasebenzisa khona i-VPN ngenkinobho elula, khetha izwe ofuna ukuthola kulo i-IP, nezinye izilungiselelo.
1.0.0.1 Ivelele ngekhwalithi-inani layo
2 Odinga ukukwazi ngeZenMate VPN
2.4 Okungeziwe kanye nezici
2.6 Isevisi yamakhasimende
3.0.0.1 Igqame ngokuphepha kwayo
4 Ungayisebenzisa kanjani i-ZenMate VPN
Ama-VPN ethu esiwathandayo
Kusuka3, € 10
Kusuka2, € 75
Kusuka1, € 79
Ama-VPN amahle kakhulu » Imibono » I-Zenmate
Amanye ama-VPN ongawathakasela:
Ama-VPN amahle kakhulu
I-VPN evikelekile 2022 - Inqubomgomo yobumfihlo - Imininingwane mayelana namakhukhi